Home » Archives by category » WARARKA MAANTA » WARARKA MAANTA (Page 3)
Meydad weli yaalla goobihii shalay Qaraxyada Argagaxiso ka dhaceen
Waxaa Saaka weli yaalla Meydad goobihii shalay Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen ee afaafka hore ee Beerta Nabadda Koontaroolka Ciidanka Ilaaladda Madaxtooyadda. Raggaan Meydka ah ayaa gaaraya afar ruux oo la is dul saaray kadibna joodari dusha laga saaray illaa shalay markii weerarka uu dhacayna halkaasi yaalay. Ilaa iyo hadda ma cadda sababaha rasmiga ah […]
Inta la xaqiijiyay Saddex ruux ayaa ku dhaawacantay ka dib markii Maanta Qarax lagu xiray gaari uu watay qof la sheegay in uu ka mid ahaa dadka degaanka uu ka dhacay Isgoyska Siinay ee Magaalada Muqdisho. Sidda ay xaqiijiyeen dad ku sugan Isgoyska Siinay Sadexda qof ee dhaawacmay labo ka mid ah waxa ay ahaayeen […]
BANAANBIXI MAANTA AAN KAQAYB GALAY ADIS ABABA
Maanta waxaan kamid ahaa dadkii ugu dhawaa barta uu raysalwasaaruhu taagnaa waliba dadka halkaa kasoo muuqda ayaan kamid ahaa markii dhacdada naxdinta leh ay dhacaysay waxaan maqalney cod sida biibii oo kale ah waana marki khudbadu dhamaatey kadib kadib waxaa la kaxeeyay Raysal wasaareha oo ilaaladu kaxaysay kadib waxaan aragney qiiq marka kadib ayan rumaysaney […]
AKHRISO: Mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo xilalkii laga qaaday iyo kuwo kale oo la magacaabay
Wareegto kasoo baxday Wasiirka Arrimaha Gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxaa xilalkii looga qaaday Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. Wasiirka ayaa xilkii ka qaaday Duqii Magaalada Beledweyne, waxaana uu Magaacay xilkaasi Mudane Cali Cabdulqaadir Faarax. Waxaa sidoo kale xilkii laga qaaday ku gudoomiye ku xigeenkii Amniga iyo Siyaasadda gobolka Hiiraan, waxaana xilkaasi […]
Booliska Federaalka Ethiopia oo loo magacabay ta;iye cusub
Ethiopia ayaa taliye cusub u magacowday booliska federaalka. Zeynu Jemal ayaa noqon doona madaxa cusub ee booliska wadanka. Magacaabista Jemal ayaa la xidhiidha is casilaada komishineerkii hore, Yared Zerihun, oo la sheegay inuu xilka uga dagay sababo ku lug leh caafimaadkiisa. Laamaha amaanka ee Ethiopia ayuu shalay ra’isulwasaarahu ku eedeeyay in ay muwadaniinta maxaabiista ah si […]
Caawa iyo Wacdarihii Gobolka Sitti Guulaysta #Barbaarta karaamaysan.
Boqollaal barbaarta reer sitti ah gaar ahaan barbaarata magaalada shiniile oo caawa si diirran.banaan bax ugu sameeyay dixda karkaraale iyaga oo ku dhawaaqaya dibu curashu dooni mayno cabdi iilay ha dhaco dhuuni.qaatayaashu hadhacaan iyo ereya la mid ah Mudaharaadka ayaa kamida mudaharaadyo caawa kadhacay guud ahaan gobalak Siti oo lagu diidanyahay Cabdi iley iyo dib […]
DAAWO:- Dhiigya Cab Cabdi iley Oo Jeelka Ku Guray in Ka badan 40 dhalinyara ah Magalada Jigjiga
Hogaamiye Dhiigya cab Cabdi Iley ayaa Xir xiray in ka badan 40 dhalinyaro ah oo laga qabqabtey Labadii Cishee lasoo dhaafay magaalada Jigjiga. Dadka deegaanka ayaa arinkaasi cabasho xoogan ka muujiyey ayaa sheegay in dhalinyaro Arday iyo Aqoon yahano isku Jiray isla markaana aanan siyaasad ku shuqul lahayn laga dhex qabqabtey magaalada iyo guryahooda . Abshir […]
baarlamaanka ethiopia oo meel mariyeey in xaalada degdega ah wadanka laga qaado
Baarlamaanka Ethiopia ayaa maanta meelmariyay xeer lagu qaadayo xaalada degdega ah ee dalka saarnayd. Gollaha wasiirada ayaa Sabtidii sheegay in amaanka dalku kasoo reeyay sidadarteed aan loo baahnayn xukun degdeg ah, Maanta laga bilaabo dastuurka wadanka ayaa shaqeynaya Bal eegno in go’aanku duruufaha maamulada qaarkood ka jira inuu wax ka badalo.